Indlela yokufumisa okusingqongileyo ngaphandle kwe-humidifier: amacebiso angcono | Uhlaziyo oluhlaziyiweyo
Photovoltaic Solar Amandla
Amandla elanga ashushu
Ukwenziwa kwezinto ezincinci
Indlela yokufumisa okusingqongileyo ngaphandle kwe-humidifier
IsiJamani sasePortillo | 10/05/2022 12:00 | Ikhaya eliGreen
Ukomisa okugqithisileyo kunye nomswakama ngaphakathi kwindlu kuyingozi kwimpilo, ngoko kufuneka sifumane indawo ephakathi phakathi kwezi zibini. Ngokukodwa kwiindawo zasebusika nangaphakathi. Xa indawo engqongileyo yomile kakhulu, kukho iindlela ezahlukeneyo zokunyusa umswakama womoya endlwini, kuba oku unokubeka ibhakethi lamanzi kwigumbi, ukutshala ezinye izityalo endlwini okanye uvule umnyango wokuhlamba. Kukho iindlela zokufunda indlela yokufumisa imo engqongileyo ngaphandle kwe-humidifier.
Kweli nqaku sikuxelela iingcebiso ezilungileyo malunga nendlela yokufumisa imo engqongileyo ngaphandle kwe-humidifier.
1 Indlela yokufumisa okusingqongileyo ngaphandle kwe-humidifier
1.1 Yiba netawuli emanzi egumbini
1.2 Beka ibhakethi lamanzi abilayo kwigumbi
1.3 Tyala izityalo ezithile endlwini
1.4 ishawa nocango luvuliwe
2 Ezinye iingcebiso malunga nendlela yokumanzisa okusingqongileyo ngaphandle kwe-humidifier
2.1 nkcenkceshela izityalo zakho
2.2 Gcwalisa itanki yentlanzi ngamanzi
2.3 sebenzisa iivazi
2.4 Beka amanzi kufuphi nomthombo wobushushu
2.6 ukuxhoma iimpahla ekhaya
2.7 Musa ukunyusa ubushushu kakhulu
2.8 Sebenzisa ifonti yangaphakathi
UMbutho wezeMpilo weHlabathi umisela ukuba kwimimandla enemozulu eyomileyo kakhulu, ukufuma komoya okufanelekileyo kwimpilo yi-60%. Xa ukufuma kungaphantsi kwe-20%, kunokubangela ukucaphuka kwamehlo, ukopha, ulusu olomileyo kunye nengxaki yokwaliwa., ngakumbi kubantu abane-asthma okanye i-bronchitis.
Ezi zezona ngcebiso zilungileyo zokufunda indlela yokunyakamisa okusingqongileyo ngaphandle kwe-humidifier:
Yiba netawuli emanzi egumbini
Ukusabalalisa itawuli emanzi ngasemva kwesihlalo, i-headboard, okanye i-footboard yindlela efanelekileyo yokufumisa umoya kwigumbi lakho. Khumbula ukuba ungayisongi itawuli njengoko iya kudala ivumba elibi.
Beka ibhakethi lamanzi abilayo kwigumbi
Eli cebiso lilungile, isiqingatha sebhakethi samanzi sanele kwigumbi, ngokusondeleyo kunokwenzeka kwintloko yebhedi ukunciphisa umoya okhoyo okhoyo kwaye uphefumle ngcono ebusuku. Ungasebenzisa ibhakethi lamanzi aromatherapy kwaye ubeke amaconsi ama-2 eoli ebalulekileyo yelavender emanzini, esi sityalo sineempawu ezikunceda ukuba uzole kwaye uphumle.
Kufuneka kuqatshelwe ukuba le ndlela yobugcisa ingasetyenziswa kumagumbi abantwana, njengoko amanzi ashushu anokubangela ukutshisa, ngakumbi ngaphandle kokubeka iliso labazali okanye abantu abadala.
Tyala izityalo ezithile endlwini
Izityalo ziyi-humectant enkulu yokusingqongileyo, ikakhulu izityalo zasemanzini ezifana ne-St. George's sword, eyaziwa ngokuba lulwimi lukamamazala, kunye neefern eziphucula umgangatho womoya.
Kubalulekile ukukhumbula ukuba izityalo zifuna ukukhathalelwa, amanzi ukuba nje umhlaba ungekho manzi kakhulu kwaye wazi ukuba izityalo kufuneka zibekwe elangeni okanye emthunzini.
ishawa nocango luvuliwe
Ngokuhlamba ngocango lokuhlambela oluvulekileyo, uvumela umphunga wamanzi ukuba usasazeke emoyeni, ufumisa imo engqongileyo kwaye wenze ukusetyenziswa kwamanzi afudumeleyo kusebenze ngakumbi. Ehlotyeni kunzima kakhulu ukuhlamba ngamanzi ashushu, ngoko ke iqhinga elihle shiya ishawari ihamba namanzi ashushu imizuzu embalwa ngelixa umntu esoma okanye enxiba.
Ezinye iingcebiso malunga nendlela yokumanzisa okusingqongileyo ngaphandle kwe-humidifier
nkcenkceshela izityalo zakho
Ubusazi ukuba izityalo ziyenzeka? Mhlawumbi ewe, kodwa amathuba awunalo nofifi lokuba ilunge kangakanani le nkqubo xa kufikwa kumanzisa igumbi. Ukuba izityalo zinkcenkceshelwa, ziya kubuyisela eyona pesenti yokufuma ukugcina umoya kwikhaya lakho umtsha kwaye uqaqambile.
Izityalo zinoluhlu lwemingxuma emincinci ngaphakathi kwamagqabi azo ukuze zisebenze. xa uwankcenkceshela, zihambisa amanzi ezingcanjini, kwaye ezi ndawo zesityalo zithwala amanzi ukuya kwimibhobho.
Umsebenzi we-pores kukukhulula umswakama kwaye ugcine kwigumbi apho zikhoyo. Ngale ndlela, igumbi apho isityalo sikhoyo siya kuba nokufuma okuphezulu kunezinye iindawo zendlu yakho. Nasiphi na isityalo sasendlini osithandayo siya kusebenza.
Gcwalisa itanki yentlanzi ngamanzi
Ukuba unetanki enkulu yentlanzi, oku kunokukunceda ukwandise ukufuma nokuba unentlanzi okanye awunayo. Kufuneka nje uyigcwalise phantse igcwele kwaye uyibeke ngobuchule kwigumbi ukuze iphume endleleni. Yilayite kwaye uvumele umoya udibane namanzi asetankini.
Ukongeza ekukuncedeni, oku kunokunceda ukujikeleza ifanitshala kwaye kuthintele iindonga okanye ifenitshala ekonakalisweni kukunqongophala kokufuma.
Gcwalisa i-vase ngamanzi kwaye ubeke iintyatyambo ozifunayo. Aba baya kuba noxanduva lokwenza okufanayo ngezityalo. Ngaphandle koko, zizinto zokuhlobisa ezinokuthi zenze igumbi libukeke ngcono.
Beka amanzi kufuphi nomthombo wobushushu
Ingaba unayo iradiyetha? Ukusebenzisa ubushushu obuvela kwisifudumezi sakho ukufumisa ikhaya lakho, gcina nje iglasi epheleleyo yamanzi kufutshane nayo, okanye nangaphezulu kweyunithi ukuba uyafuna. Le nkqubo iwatshintsha kancinane amanzi abe ngumphunga, yaye umphunga unoxanduva lokongeza ukufuma kwimekobume nokunqanda ukuba ukoma.
Inzuzo yale ndlela kukuba uya kusebenzisa ubushushu ukufumana ubushushu obufunayo, ngelixa unika inqanaba elingcono lokufuma.
oku ngokuqinisekileyo enye yezona ndlela zilula kuba ukupheka yinto esiyenzayo yonke imihla. Ukupheka ukutya okufana nesuphu okanye ikhrimu okanye amanzi abilayo nje kuya kukhulula ukufuma kwaye kwenze indawo engqongileyo yome.
ukuxhoma iimpahla ekhaya
Ukugcina inkangeleko ecocekileyo kwaye ugweme ukuthatha indawo eninzi, abantu abaninzi baxhoma iimpahla zabo ngaphandle kwendlu. Nangona kunjalo, ukuxhoma iimpahla ezimanzi ngaphakathi endlwini kunokunceda ukufumisa imeko-bume. Ngaphandle koko, ungalithambisa igumbi ngesicoci esisetyenzisiweyo.
Musa ukunyusa ubushushu kakhulu
Ukugcina okusingqongileyo kupholile kancinci kuya kukunika ukufuma okuphezulu, njengoko ukuguqula ubushushu yeyona nto ibangela ubushushu obuphezulu obukhokelela kwiindawo ezomileyo. Zigqume ngedyasi kunye nengubo kwaye uphephe ukuthembela kuloo mithombo yobushushu yangaphandle ukukugcina ushushu.
Sebenzisa ifonti yangaphakathi
Okokugqibela, ukuthenga umthombo wangaphakathi kunokubiza imali ethile kodwa kunokukunceda uhombise ikhaya lakho. Ezi zixhobo zivela kwiisayizi ezahlukeneyo kunye noyilo, ngoko ungakhetha leyo ifanelana nezinto ozithandayo.
Okugqwesileyo konke, ukuphulaphula isandi samanzi awelayo kuya kuphumla, ngoko unokuzuza ekuhlobiseni, ukuphumla kunye nokuthambisa ngemveliso enye.
Ukulandela amanyathelo ambalwa kunokukunceda ufezekiseke ngcono ukufuma ngaphandle kwexesha, nangona kunjalo, ukulandela amanyathelo ambalwa ngaxeshanye kuya kwenza ikhaya lakho libe kumgangatho ophakamileyo wokufuma ngokukhawuleza.
Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi unokufunda ngakumbi malunga nendlela yokufumisa okusingqongileyo ngaphandle kwe-humidifier.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Ukonga umbane » Ikhaya eliGreen » Indlela yokufumisa okusingqongileyo ngaphandle kwe-humidifier
Gcina kwityala lakho lombane
Ngaba uyafuna ukonga ityala lakho lombane? Fumana SIMAHLA € 30 isaphulelo usebenzisa ikhowudi HOLA30.
Gcina nge-100% yamandla aluhlaza
Kinetic kunye namandla anokubakho
Izizathu zempembelelo ye-greenhouse
Fumana amanqaku amatsha malunga namandla ahlaziyekayo kunye ne-ecology.
Ukuyilwa kunye nezifundo